ချစ်ကြည်အေး: စိတ်ကြိုး အပြတ်
အန်တီလေးမေခင် Mon Jun 03, 04:43:00 PM GMT+8
Yan Mon Jun 03, 06:05:00 PM GMT+8
မချစ်အရေးအဖွဲ့တွေကြားထဲ မျောပြီး ရှေ့ဆက်ဘာဖြစ်မလဲလို့ တွေးရင်း တစ်ခန်းပြီး တစ်ခန်း ဆက်တိုက်ဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ်။
ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်နှစ်ခု ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို အပြစ်တစ်ခုလို့ ခံစားယုံကြည်နေတာဟာ ရွံရှာမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သူတော်စင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ့.
နောက်တစ်ခုကတော့ ကိုယ်မြတ်နိုးတဲ့ ကိုယ့်ခန္ဓာနဲ့ ဘဝကို တစ်ပါးသူအတွက် ပေးဆပ်လိုက်ရမှာကို နှမျောတသ ဖြစ်နေမိတဲ့ စိတ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်တကယ်ဘာလိုချင်မှန်းမသိတဲ့ မရင့်ကျက်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တစ်ခုများ ဖြစ်သွားလေမလား...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုချစ်သွားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် တာဝန်ဝတ္တရားအရ ဘဝအဖော်ရှာတာထက် တစ်ကိုယ်ထီးတည်းနေတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
အားပေးနေမယ် စာရေးဆရာမကြီးရေ...း)
Thwin Mon Jun 03, 08:35:00 PM GMT+8
စိတ်မှာ အနာ ရဖူးတာမျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ ရမလားပဲနော်..။ စိတ်ကြိုးအပြတ်လေး က လဲ အတွေးတွေ ပေးတယ်..။
khayayphyu Mon Jun 03, 09:12:00 PM GMT+8
ဟုတ်တယ် တချို့ အမှတ်တမဲ့နေတဲ့အမေတွေနဲ့ဆို အဲလိုပဲ အမျိုးမကင်းပေမယ့် ဖြစ်ကျရော။ မြန်မာပြည်မှာက ဒီလိုပညာပေးအရေးအသား အားနဲတယ်။ ကောင်းတယ် အမချစ်
မိုးနတ်ကြယ်စင် Mon Jun 03, 09:57:00 PM GMT+8
အတွေးလေးဆန်းတဲ့ အမရဲ့ ၀တ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်...
စိတ်မှာဒဏ်ရာဖြစ်နေတဲ့အတွက် အဲဒိ အစွဲအလန်းကနေ
မိုးနတ် အမြင်နဲ့တူတယ်...အမရဲ့ အရေးအသားတွေကတော့
အပိုအလိုမရှိ ကွက်တိ ကောင်းလျက်ပါပဲ :)))
Anonymous Tue Jun 04, 01:26:00 AM GMT+8
တကယ့် ပရော်ဖက်ရှင်ရှယ် စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရဲ.လက်ရာပါ။ ဘလော့ဂါကနေ စာရေးဆရာစစ်စစ် ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ ၀မ်းသာပါတယ်။ အားပေးလျှက်ပါ။
မြသွေးနီ Tue Jun 04, 12:51:00 PM GMT+8
ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ရေးဖို့ စဉ်းစားနေမိလိုက်တာလေ...
စုရဲ့မသိစိတ်က သူ့လူကို တကယ်မချစ်နိုင်ပဲနဲ့ လက်ထပ်ယူခဲ့လေရော့သလား...
သို့တည်းမဟုတ်.. ယောကျာ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခံစားချက်တွေကပဲ ယောကျာ်းတွေကို ရွံရှာစိတ်ဖြစ်မိနေစေလေသလား...
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:43:00 AM GMT+8
တန်ခူး Fri Jun 21, 10:54:00 PM GMT+8
Runaway bride. စုရဲ့ဘဝအတွေ့ အကြုံနဲ့ ယောင်္ကျားတွေကို ယုံကြည်လို့ မရတဲ့စိတ်ကြောင့် ဒီအဆုံးသတ်လေးက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ မ ရေ
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 01:35:00 AM GMT+8
အာ့လိုမဖြစ်ချင်ရင် အစောကြီးကတည်းက လက်မထပ်ပဲ ငြင်းလိုက်ပေါ့ အခုဟာက သူတော်စင်ယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်နဲ့ ဖာဆန်တဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ် စာပေအဆိပ်တွေမဖြန့်ဝေပါနဲ့လား ကွကိုယ် တစ်ယောက်တည်းနေလိုရင်နေလေ ဘာလို့လိုက်ယုတ်ပတ်တာတုန်း
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 01:36:00 AM GMT+8
ခင်ဗျားအမေလဲ အာ့လိုလုပ်သင့်တယ်နော် အာ့မှခင်ဗျားဆိုတာလဲမရှိလာတော့မှာ
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 01:37:00 AM GMT+8
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:03:00 AM GMT+8
ဒါမှမဟုတ် စောက်ပိန်းဖမ်းတာလား စောက်ပိန်းတွေ တော်တော်လာမန့်လို့လေ
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:04:00 AM GMT+8
ယီးအာ့လောက်ကြောက်နေပုံထောက် 4ccနဲ့တွေ့ခဲ့ပုံပဲ ခ်ခ်
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:06:00 AM GMT+8
လူသားဖြစ်လာရင် Sexဆိုတာ ကြုံတွေ့ရမှာ Naturalပဲ အများကြီးပြောခဲ့ပီးပီ တိုတိုပဲပြောမယ် စာပေမဆိပ်မခပ်နဲ့ ကွကိုယ်ယီးကြောက်ရင် ယီးကြောက်သလိုသာနေ လူတကာကို အိမ်မြောင်အမြီးပြတ်လိုက်မညှိနဲ့
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:42:00 AM GMT+8
Nihilismလား အထင်ကြီးပြီးဝင်ဖတ်တယ် ကိုယ့်စပကိုယ်ထိုင်သတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဝါဒဖြစ်နေတယ် ဖတ်မိတဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံး အားနာလိုက်တာ
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:44:00 AM GMT+8
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:48:00 AM GMT+8
အာ့ဝတ္ထုတိုထဲက မိန်းမထက် ပြည့်တန်ဆာကတောင် မြတ်ပါသေးသည်ဖြစ်ပါကြောင်း
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:49:00 AM GMT+8
ထိုမိန်းမရဲ့အဖေနဲ့ ထိုမိန်းမရဲ့အမေသည် ထိုမိန်းမမမွေးခင်ကတည်းကပင် သေသင့်ပါကြောင်း
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:51:00 AM GMT+8
အကျွန်ုပ်လို လူ့အမှိုက်ထက်ပင် အနှီမိန်းမသည် စိတ်ဓာတ်ယုတ်ညံ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်ပါကြောင်း
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:52:00 AM GMT+8
လောကကြီးကောင်းကျိုးကို ရှေးရှုသည့်သဘောဖြင့်အကြံပေးရလျှင် အနှီအမျိုးသမီးကွကိုယ်သတ်သေသင့်ပါကြောင်း
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:53:00 AM GMT+8
ကိုယ့်စပကိုယ်ထိုင်သသည့် အပျိုကြီးဝါဒီများအားလုံးသည် World War Zသို့သွား၍ Zombieအကိုက်ခံသင့်ပါကြောင်း
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:57:00 AM GMT+8
မဟေသီ မဂ္ဂဇင်းတိုက် အယ်ဒီတာအနေဖြင့်လဲ ယောက်ျားဖြစ်ပါက ကွလပွတ်ကိုယ် ခုတ်ဖြတ်သင့်ပါကြောင်း မိန်းမဆိုလျှင် ကြွက်သတ်ဆေးကို စိန်အဆိပ်သမအောင် ရောမွှေကာ ဘက်ထရီထဲက အက်ဆစ်မဆိုစလောက်လေးထဲ့၍ သောက်သုံးသင့်ပါကြောင်း
Minn Thit Lwin Sun Jan 15, 02:58:00 AM GMT+8
အားလုံးကို ကျေးဇူးပါခမျ ဆက်လက်၍ နေ့တိုင်း စိတ်ကူးပေါ်ရင် ပေါ်သလို လာမန့်ပါဦးမည်
Nann Yamone Sun Jan 15, 07:21:00 PM GMT+8
Nann Yamone Sun Jan 15, 07:26:00 PM GMT+8
Nann Yamone Sun Jan 15, 07:47:00 PM GMT+8
ယ့်ဖာသာကိုယ် အပျိုကြီးလုပ်ချင် လုပ်ပါ မသိမနားလည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုအတွေးလွဲအောင် ဒီလိုစာမျိုးမတင်ပါနဲ့ မမရယ်
Unknown Sun Jan 15, 07:55:00 PM GMT+8
Unknown Sun Jan 15, 08:02:00 PM GMT+8
အော် ခက်တော့တာပဲ ဒီအမျိုးသမီးအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေနဲ့တော့လေ
Minn Thit Lwin Mon Jan 16, 01:53:00 PM GMT+8
သွားပြောမနေနဲ့ ကိုမိုးပြည့်ရေ့ အာ့အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်တယ့် ချီးထုပ်တွေကို
Chit Kyi Aye Mon Jan 16, 03:04:00 PM GMT+8
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ sexual abuse ကို နားလည်မှ ဒီစာကို သဘောပေါက်မှာပါ။ ဝတ္ထုတိုရဲ့ သဘောက ဇာတ်ကွက်တစ်ခုကို ကိုယ်ပြချင်တဲ့နေရာအထိပဲ ရပ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဒီဇာတ်ကောင်အမျိုးသမီးရဲ့ ငယ်ဘဝက လိင်စိတ်ကြောက်ရွံ့မှုအတွက် counselling လုပ်ရမယ့်အပိုင်းတွေ၊ သူ့ကို ပြန်ရှာတွေ့တဲ့အပိုင်းတွေ ကျွန်မ ချန်လှပ်ခဲ့ပါတယ်။ သေချာတာက ကျွန်မစာဖတ်ပြီး ဘယ်မိန်းမကမှ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ကြောက်ရွံ့နေကြမယ် မဟုတ်ဘူးရှင့်။ အမျိုးသမီးအစွန်းရောက်ဝါဒီဆိုတဲ့ အနက်ကို သိအောင် အားထုတ်လိုက်ကြပါဦးလေ။ ဒီစာက အမျိုးသမီးဝါဒလား၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုခံခဲ့ရတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ဘဝက အရိပ်စွန်းထင်ခံခဲ့ရမှုကို ပြောချင်တာလား ဦးနှောက်ရှိတဲ့စာဖတ်သူတိုင်း သိကြမှာပါ။ ကိုမင်းသစ်လွင်...ကျွန်မစာကို ဝေဖန်ချင်ဝေဖန်ပါ၊ ချီးထုပ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းက ပါစင်နယ်သိပ်ဆန်တဲ့အထိ ကျွန်မကို စော်ကားတဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားပါပြီ။ စာဖတ်တတ်အောင် ကြိုးစားပါလို့သာ ပြောချင်ပါတယ်။
Minn Thit Lwin Mon Jan 16, 04:10:00 PM GMT+8
ခင်ဗျားပြောချင်တဲ့ အပိုင်းကျုပ်ကနားလည်ပေမယ့် ငပိန်းလေးတစ်ချို့က ရေလိုက်လွဲသွားနိုင်တယ် ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဖိုနဲ့မ ပေါင်းစပ်တာကိုပဲအပြစ်လိုပြောတတ်တဲ့ ငကြောင်ငအူလဒူ ငစနူတွေရှိတော့ အာ့လူတွေနဲ့ သာမန်လူသားတွေရဲ့တိုက်ပွဲ ပြန်ပြီး ချီးချောက်ရေနှူးနေသလိုဖြစ်နေလို့ပါ စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ ကျနော်ကမြင်တဲ့အတိုင်းရေးတတ်လို့ပါ အာ့လိုလုပ်လို့ပေးဆပ်မှုက သေခြင်းတရားလောက်တော့မဆိုးရွားလို့ပါပဲ